WOWOW Kicheni Tende Kutsiva Yakasvina Musoro Bronze Nickel
musha / zvishongedzo / Faucet accessories / WOWOW Kicheni Tepa Inotsiva Spray Musoro Brushed Nickel
Iyi yekudhonza kicheni faucet kutsiva musoro ine yakakwirira mhando ABS aerator inogona kuve nyore kuisirwa mari, saka hapana mvura yakaoma, uye zvakare chiyero inochengetedza mvura yekushandisa uye nehupenyu hupenyu.
Iyi yekudhonza-pasi yekuzora 2660002 pfungwa yakanakira mukicheni faucet nekukwevera kunze sprayer. Aquablade maitiro ndeyechokwadi ane masimba masimba maitiro, ayo anogona nyore kupeja chikafu chikafu, uye ndiwo mhando yakakosha pamusika. Shanduko nyore pakati pematatu modes
CHINOKOSHA ZVINOGONESESA: Injini yepurasitiki yegiredhi (ABS) yakaungana, ichisimbisa kugara uye kunaka. Iyo kicheni kunyura faucet musoro Yakagadzirwa kubva kuABS mapurasitiki ane bramm nickel kupedzisa, kunyanya ndarira inoita kunge yakapfuma uye izere nehupenyu
Zvakareruka KUNOGADZA uye KUPINIRA: Iyo tapuro yekusuka musoro Yakagadzirwa kubva kuNeubler rubha, mvura inosvika zvinyoronyoro; iro parutivi rweiyi yekukwevera-kubuda musoro Musoro rakagadzirwa kubva kune silicone nozzles, iri nyore kuchenesa, ingobvisa dhiziri rako rekare rekushongedza uye uchitsiva nerako idzva iwe kushandura kicheni yako wega
MAKORE 2 garandi: Pombi yekupfapfaidza pfungwa inosanganisira garandi yemakore maviri. Iyi yekumwaya musoro haina dhizaini yekuita, ichave iri iyo modhi yaunodzima pombi yekupedzisira.
SKU: 2660002 Categories: zvishongedzo, Faucet accessories Tags: zvishongedzo, mwaya